५ जना विद्यार्थीको हात भाँचिने गरी कुट्ने शिक्षिका प्रक्राउ - Nayapulonline
५ जना विद्यार्थीको हात भाँचिने गरी कुट्ने शिक्षिका प्रक्राउ
प्रकाशित मिति : Tuesday, June 4, 2019 nayapulonline
राेल्पा/ “गुरु ब्रह्मा , गुरु विष्णु , गुरु देवो महेश्वरा , गुरु साक्षात पारब्रह्म , तस्मे श्री गुरु देव नमः” यही भनाईलाई मानेर नै सबैले गुरुलाई भगवान मान्छन् तर तीनै गुरुको व्यवहार कहिलेकाही दानव जस्तो भईदिँदा विद्यार्थीहरु मारमा पर्दै आएका छन् । अशिक्षाको अन्धकारबाट उज्यालोमा ल्याउने काम गर्ने तीनै शिक्षकको कुटाईबाट विद्यार्थीहरु अंगभंग हुनु पर्दा कस्तो होला । हिजोमात्र रोल्पामा शिक्षिकाको कुटाईबाट ५ विद्यार्थीको हात मात्र भाँचिएन अन्य १४ जना पनि घाईते भएको खबर बाहिरियो । रोल्पाको रुम्टीगढी गाउँपालिका–८ स्थित भानु आधारभूत विद्यालयकीशिक्षिका लक्ष्मी पुनले विद्यालयमा ढिलो गरी आएको भन्दै ती विद्यार्थीमाथि कुटपिट गरेकी थिईन् । उक्त घटना सार्वजनिक भएपछि अर्काे बिरोध भयो । विद्यालय ढिलो आएको भन्दै कुट्ने शिक्षिका भने प्रक्राउ परेकीछिन्।
इलाका प्रहरी कार्यालय होलेरीबाट गएको प्रहरी टोलीले शिक्षिका पुनलाई सोमबार दिउँसो नियन्त्रणमा लिएको हो । उनलाई पीडित पक्षले दिएको जाहेरीका आधारमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने प्रहरीले बताएको छ ।शिक्षिकालाई इलाका प्रहरी कार्यालय होलेरीमा राखिएको छ । शिक्षिका पक्राउ परेसंगै पीडित बालबालिकाका अभिभावकलाई पनि तत्काल ईप्रकामा बोलाइएको होलेरी प्रहरीले निवेदन लेख्न भनेपनि आफूहरुले लेख्न नजानेको एक अभिभावकले बताए । उपचार खर्च १८ हजार दिने सहमतिमा घटना मिलाएपनि पैसा नदिएपछि घटना सार्वजनिक भएको हो । जेठ १२ गते निमित्त प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी सम्हालेकी पुनले निजी स्रोतमा कक्षा १ देखि पाँच सम्म पढाउदै आएकी छिन् । उनले यसअघि पनि विद्यार्थीहरुलाई यसरी नै पिट्ने गरेको घाईते विद्यार्थीहरुले बताएका छन् ।
शिक्षिकाको यातनाका बारेमा अभिभावकलाई बताउन चाहे पनि फेरी कुटाई खाने डरले उनीहरुले बताएका थिएनन् । शिक्षिकको कुटाईबाट यसअघि पनि एक जना बिद्यार्थीको कान फुटेको र अहिले कानै नसुन्ने भएको समेत विद्यार्थीले बताए। यता शिक्षिका पुनको कुटाईबाट विद्यालयमा रुवावासी चलेपछि हेर्न नसकेर आफू अफिस भित्र प्रवेश गरेको र छुटाउदा आफैले पनि कुटाई खाइने डरले नजिक जान नसकेको अन्य शिक्षकहरुले बतँएका छन् । शिक्षिकाको कुटाईबाट हात भाचिएकाहरु भीमकुमारी बाँठा, निर्मला पुन, गौरी घर्ती, शान्ता नेपाली र विमला रोका रहेका छन् ।
१५ जिल्लाका प्रजिअ फेरिए, को कहाँ ?
भूकम्पको हल्ला फैलाउने ज्योतिष अर्जुन क्षेत्री पक्राउ
प्रदेश न. ३ मा ‘एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै
काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलमा विषादी प्रयोगशाला सञ्चालन
स्याङ्जामा नगरपालिकालाई अस्पताल हस्तान्तरण
वडा अध्यक्षले रुवायो, स्थानिय युवकले खुवायो
शुद्धिकरण भन्दै १४५ मध्ये ९९ को सदस्यता खारेज गरेपछि पत्रकार महासंघ दोलखाको तिब्र आलोचना